प्रचण्डलाई पन्छाउने नेपाललाई मन्साउने यस्तो खेल ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
प्रचण्डलाई पन्छाउने नेपाललाई मन्साउने यस्तो खेल !
२० जेष्ठ २०७३, बिहीबार ००:००
काठमाण्डौ, २० जेठ । प्रधानमन्त्री केपी आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने भन्दै आन्तरिक रुपमा विभिन्न दलसँग छलफल गरिरहेका छन् त्यही अनुसारको अभिब्यक्ति समेत आइरहेको पनि छ ।
अर्को तर्फ एमालेसँग भद्र सहमति भएको भन्दै सो अनुसार बजेट पारित भएपछि आफ्नो नेतृत्वमा सहमति सरकार गठनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दै एमालेमा दवाब सृजना गर्दै आएका छन् । त्यसो तर एमालेका बरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपाल पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न तम्सिएका छन् ।
राजनीतिमा मध्यमार्गी नेताको छवि बनाएका पूर्व प्रधानमन्त्री एबं एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी खेल सुरु भएको चर्चा पनि चलेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको समर्थन खोजिरहेका छन् तर यस पटक सहजरुपमा उनले कांग्रेसको समर्थन नपाउने बुझिएको छ ।
यसरी प्रचण्ड हाई हाई गराएर बाई बाई गर्ने रहस्य प्रदाफास भएको हो । त्यसकारण नेपालले पार्टी भित्रै पनि आफ्नो पक्षमा बहुमतको अवस्था सृजना गरेका छन् । नेपाललाई बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समर्थन जनाईसकेका छन भने उपाध्यक्ष बामदेब गौतम पनि यो विषयमा लचिलो भएका छन् एमाले एक नेताले भन्यो ।
नेपालको पक्षमा अहिले भारत पनि पोजेटिभ छ ती नेताले भने । भारत कुनै पनि हालतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई फाल्ने रणनीतिमा रहेको ती नेताको दाबी छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना नदेखेर अरु भन्दा अलि बढी विश्वास भारतले पनि अहिले नेपाललाई गरिरहेको बिश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समयमा पार्टी भित्र प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध आक्रमक बन्दै आएका नेपाल , खनाल र गौतम ओली तनाबमा छन् । नेपालले कांग्रेस र मधेसी दल ल्याए भने मधेसको समस्या समाधानकोलागि संविधान संसोधन गर्ने बातावरण समेत बन्न सक्ने भारतको बुझाई छ ।
भारतले समेत नेपालको पक्षमा हरियो झण्डा देखाएर मधेससहित नेपाली कांग्रेसलाई त्यसको पक्षमा गतिविधी गर्न सुझाव दिईसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: Jun 2, 2016